International Campaign for Freedom of Aung San Suu Kyi and Burma: Burma News International::07 May 2008
Burma News International::07 May 2008
Release of Nation-wide Voters Survey on the Burmese Referendum
Download BNI's Release of Nation-wide Voters Survey on Burmese Referendum report
Bangladesh relief team leaves for Burma
Dhaka: A Bangladesh armed forces team will fly to Burma today with relief material donated by the Bangladesh government for victims of cyclone Nargis, said an official press report.
Cargo of fish sinks in Nargis
Dhaka: A cargo ship used to carry fish called Radana Win Win sank in Rangoon port along with four other cargo ships when cyclone Nargis lashed Burma on Saturday. The ships were preparing to leave for Bangladesh with goods for export, saidaBangladesh fish company owner over telephone.
Four arrested for anti-referendum campaign in Chin state
Paletwa: Four people from Paletwa Township in western Burma's Chin State were arrested on Monday by police for distributing some anti-referendum posters and pamphlets in the area, saidasource from the area.
Advance votes in Kachin village reject new constitution
Advance votes inaKachin village in Northern Burma have rejected the draft constitution, residents said.
Junta doles out money and cloths for referendum
The Burmese military junta in order to woo voters for the ensuing referendum to approve the constitution on May 10 has been mobilising residents in Myitkyina, the capital of Kachin State by giving clothes and money,aresident said.
Commission for referendum marks 'Yes' vote for people
Commission holding for the referendum has already cast 'Yes' vote for quiteanumber of people for the May 10 to approve the draft constitution.
မုန်တိုင်း ကြိုတင်သတိပေးစနစ် မရှိသဖြင့် ထောင်ချီ သေဆုံးရဟု ကပ်ဘေးအန္တရာယ် ပါရဂူက ပြောဆို
Written by မုံပီး
Wednesday, 07 May 2008 13:46
နယူးဒေလီ။ ။ လူပေါင်း သောင်းနှင့်ချီ၍ သေဆုံးခဲ့ရသော ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက် ဖျက်ဆီးခြင်း မပြုမီ ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်တွင် စတင် ဖြစ်ပေါ်နေကတည်းက မြန်မာအစိုးရ သိရှိခဲ့ပြီး မုန်တိုင်းကြိုတင် သတိပေးစနစ် မရှိသောကြောင့် နာရီပိုင်းအလိုအထိ ကြိုတင် သတိပေးနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိဟု သိရသည်။
ရန်ကုန်လူထု အနေအစား အတွက် အသဲအသန် လုံးပန်းနေရ
Written by နန်းဒေဝီ
Wednesday, 07 May 2008 13:27
နယူးဒေလီ။ ။ ရန်ကုန်နေ ပြည်သူများအဖို့ အင်္ဂါနေ့က ဆန်နှင့် အခြားကုန်စည်များ ပြတ်လပ်နေပြီး ပုံမှန်နှုန်းထက် ၂ ဆကျော် ပေးဝယ်နေရသည်။
ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝတွင် ဆန္ဒခံယူပွဲ ဆန့်ကျင်သည့် စာရွက်များ ဖြန့်ဝေ၍ လူ ၄ ဦးဖမ်းဆီးခံရ
Wednesday, 07 May 2008 13:23
ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် ဆန္ဒခံယူပွဲအား ဆန့်ကျင်သည့် စာရွက်စာတန်းများ ဖြန့်ဝေမှုကြောင့် လူ ၄ ဦးဖမ်းဆီး ခံခဲ့ရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
NOTE:: BNI web-site is best viewed by Mozilla Firefox browser. You can download it here